बाइबलका कथाहरू: जैतून डाँडामा - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
चित्रमा हेर त। येशू जैतून डाँडामा हुनुहुन्छ। उहाँसँगै बसिरहेका चार जना उहाँका प्रेरितहरू हुन्। अन्द्रियास र पत्रुस दाजुभाइ हुन् भने बाँकी दुई जना याकूब र यूहन्ना पनि दाजुभाइ नै हुन्। चित्रमा तिमी यरूशलेमको मन्दिर पनि देख्न सक्छौ।
गधाको बच्चामा चढेर येशू यरूशलेम जानुभएको भर्खर दुई दिन भएको छ। आजको दिनचाहिं मंगलबार हो। केही समयअघि आजकै दिन येशू मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पूजाहारीहरूले येशूलाई समातेर मार्ने कोसिस गरेका थिए। तर मान्छेहरूले येशूलाई मन पराएको देखेर उनीहरू उहाँलाई मार्ने हिम्मत गर्दैनन्।
येशूले ती धर्मगुरुहरूलाई ‘सर्प र सर्पका सन्तान’ भन्नुहुन्छ! उनीहरूको खराब कामको लागि परमेश्वरले सजाय दिनुहुनेछ भनेर पनि येशू भन्नुहुन्छ। यसपछि, येशू जैतून डाँडामा उक्लनुहुन्छ। डाँडामा पुगेपछि चार जना प्रेरित उहाँलाई प्रश्न सोध्न थाल्छन्। उनीहरूले येशूलाई के सोधिरहेका छन्, तिमीलाई थाह छ?
प्रेरितहरूले भविष्यमा हुने कुराबारे सोधिरहेका छन्। येशूले पृथ्वीमा भएका सबै खराब कुरा हटाउनुहुनेछ भनेर उनीहरूलाई थाह थियो। तर कहिले, त्यो पनि उनीहरू जान्न चाहन्छन्। येशूले कहिले राज्य गर्नुहुनेछ भनेर उनीहरू थाह पाउन चाहन्छन्।
उहाँ राजा हुनुहुँदा चेलाहरूले उहाँलाई देख्न सक्ने छैनन् भनेर येशूलाई थाह छ। किनभने त्यतिखेर उहाँ स्वर्गमा हुनुहुनेछ। त्यसैकारण उनीहरूले उहाँलाई देख्न सक्ने छैनन्। उहाँ स्वर्गमा राजा हुनुभएपछि चेलाहरूले थाह पाऊन् भनेर येशूले त्यतिखेर पृथ्वीमा हुने घटनाहरू बताउनुहुन्छ। ती घटनाहरू के-के हुन्?
पृथ्वीमा त्यतिखेर ठूलठूला लडाइँहरू हुनेछन्, थुप्रै मान्छेहरू बिरामी अनि भोका हुनेछन्, जताततै अपराध हुनेछ र ठूलठूला भैंचालोहरू जानेछन्। साथै, पृथ्वीभरि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार पनि गरिनेछ। अहिले यी सबै कुरा भइरहेको छ कि छैन, सोच त। हो, यी सबै कुरा अहिले भइरहेको छ। त्यसो भए येशूले अहिले स्वर्गमा राज्य गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी ढुक्क हुन सक्छौं। अब उहाँले छिट्टै पृथ्वीबाट सबै खराब कुरा हटाउनुहुनेछ!
मत्ती २१:४६; २३:१-३९; २४:१-१४; मर्कूस १३:३-१०.
चित्रमा देखाइएका मान्छेहरूमध्ये येशू कुनचाहिं हुनुहुन्छ र उहाँसँगै बसिरहेका अरूचाहिं को हुन्?
धर्मगुरुहरूले मन्दिरमा येशूलाई के गर्न खोज्छन् र उहाँले उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
प्रेरितहरूले येशूलाई के सोध्छन्?
स्वर्गमा राज्य गर्न थाल्नुभएपछि पृथ्वीमा हुने कुराहरूबारे येशूले आफ्ना प्रेरितहरूलाई किन बताउनुहुन्छ?
पृथ्वीबाट सबै दुष्टता हटाउनुअघि के हुनेछ भनेर येशूले बताउनुहुन्छ?
मत्ती २४:१-३९ पढ्नुहोस्।
केही सांसारिक दर्जा वा उपाधिलाई बाइबलले अनुचित नठाने तापनि मसीही मण्डलीमा आडम्बरी दर्जा वा उपाधिको प्रयोगबारे मत्ती २३:८-११ मा लेखिएका येशूका शब्दहरूले के बताउँछ? (प्रेरि. २६:२५; रोमी १३:७; १ पत्रु. २:१३, १४)
मान्छेहरूलाई मसीहीधर्म अँगाल्नदेखि रोक्न फरिसीहरूले के गर्ने कोसिस गरे र अहिले धर्मगुरुहरूले पनि कसरी त्यस्तै गरिरहेका छन्? (मत्ती २३:१३; लूका ११:५२; यूह. ९:२२; १२:४२; १ थिस्स. २:१६)
मत्ती २४:१-१४ पढ्नुहोस्।
मत्ती २४:१३ मा स्थिर रहनुपर्ने आवश्यकतालाई कत्तिको जोड दिइएको छ?
मत्ती २४:१३ मा उल्लिखित “अन्त” शब्दको अर्थ के हो? (मत्ती १६:२७; रोमी १४:१०-१२; २ कोरि. ५:१०)
मर्कूस १३:३-१० पढ्नुहोस्।
मर्कूस १३:१० मा उल्लिखित कुनचाहिं शब्दले सुसमाचार प्रचार गर्न पटक्कै ढीलो गर्न हुँदैन भनेर देखाउँछ र येशूले भन्नुभएको कुराले हामीमाथि कस्तो प्रभाव पार्नुपर्ने हो? (रोमी १३:११, १२; १ कोरि. ७:२९-३१; २ तिमो. ४:२)
बाइबलमा बताइएको अन्तको समयको चिन्हको चारवटा पक्ष केलाउनुहोस्।